Free Crypto Signals Telegram Groups 🥇 Top 5 Eprel 2021
Ọnọdụ azụmaahịa nke cryptocurrency na-abụzi ebe agha ọtụtụ ijeri dollar. Ọbụghị naanị na nke a gụnyere ego dijitalụ ama ama dị ka Bitcoin, Ethereum, na Ripple - mana mkpoko nke cryptocurrencies pere mpe.
Otú ọ dị - na dị ka nke ọ bụla ahia n'ịntanetị n'ọgbọ egwuregwu, ịzụrụ ma na-ere cryptocurrencies na echiche nke ị nweta ego adịghị mfe. Kama nke ahụ, ịkwesịrị inwe nghọta miri emi dị omimi banyere nyocha ọrụaka.
Ozi ọma ahụ bụ na e nwere ihe ọzọ maka mkpa iji nọrọ ọtụtụ ọnwa na ọnwa iji mụta otu esi agụ chaatị eserese dijitalụ - Telegram crypto signals. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, site na isonye na ọrụ mgbaàmà dị elu dị ka Mụta ahia 2 - ị ga-enweta ntụzịaka azụmaahịa cryptocurrency site na ngwa Telegram.
Fancy achọta ihe banyere otú Telegram crypto n'ókè nwere ike ikwe ka ị nọrọ n'ihu nke usoro na nke a otutu trading okirikiri? Ọ bụrụ otu a - ntuziaka a ga-akọwacha ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ọrụ mgbamgba cryptocurrency Mụta 2 Trade Telegram!
Mụọ ọrụ ahia 2 n'efu
Nweta 3 Free Signals kwa Izu
Enweghị mentkwụ orgwọ ma ọ bụ Kaadị Nkọwa Mkpa
Nwalee Efdị Irè nke ọkwa nrịba ama anyị
Isi, Nke pere mpe, na ụdị Exotic Ekpuchi
Nweta Free Signals Ugbu a
Gịnị bụ Telegram Crypto Signals?
Tupu anyị eruo nitty-gritty, anyị kwesịrị ibu ụzọ kọwaa ihe akara ngosi cryptocurrency bụ n'ezie. Na ụdị nke kachasị, akara bụ aro azụmaahịa ezitere gị na ezigbo oge.
Nke a nwere ike ịbịa site na ozi SMS, email, ma ọ bụ ngwa izi ozi dị ka Telegram. Ihe mgbaàmà ahụ n'onwe ya ga-enwe usoro ntuziaka ga-enyere gị aka irite uru na nyocha ọkachamara ọkachamara.
Dịka ọmụmaatụ, mgbaàmà ahụ nwere ike ịgwa gị ka ị zụta BTC / USD na $ 14,500 n'ihi na akara ngosi RSI na-egosi na ụzọ ahụ gafere.
N'otu aka ahụ, ihe mgbaàmà nwere ike ịgwa gị ka ị ghara ire ETH / EUR dị mkpụmkpụ n'ihi na agbajikwala akara nkwado dị mkpa.
Na mgbakwunye na ọnụ ụzọ na ọnụahịa ntinye, akara ngosi Telegram kacha mma ga-agwa gị ihe iwu nkwụsị na iji nweta uru iji melite. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, nke a na-eme ka o doo anya na ị nwere ike ịzụ ahịa cryptocurrencies ma n'otu oge ahụ na-ebelata ihe egwu gị.
Ole ndị bụ Telegram Crypto Signals Adabara?
Ihe mgbaàmà Telegram crypto adabara maka ọtụtụ ebumnuche ego na profaịlụ ahụmahụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ma ị bụ ahịa ọhụụ zuru oke nke cryptocurrency ma ọ bụ onye nwere azụmaahịa nwere ọhụụ nwere obere oge n'aka gị - akara nwere ike ịbụ azịza ị na-achọ.
Nke a bụ ihe kpatara ya:
Have nweghị echiche ka esi zụọ ahịa Crypto
Ọ na-aga n'ekwughị na akara Telegram crypto na-enye aka maka ịzụ ahịa na-enweghị atụ, na-enweghị ahụmịhe ọ bụla. Nke a bụ n'ihi na ịchọghị ịme nyocha ma ọ bụ nyocha ọ bụla. N'aka nke ọzọ, ọrụ mgbama Telegram cryptocurrency ga-enye gị ọnụahịa ntinye na ụzọ ọpụpụ ịchọrọ iji dobe na onye ahia ị họọrọ.
Nke a dị oke mkpa, ebe ịnwe ike ịchọpụta ụzọ ahịa ọnụ ahịa cryptocurrency ga-aga n'oge na-adịghị anya bụ kuki siri ike ịgbawa. E kwuwerị, ịmụ ihe nyocha na nyocha nke ọrụaka, eserese ngwaọrụ, na usoro ahịa nwere ike were ọtụtụ afọ iji mara. Nke a bụ ihe kpatara na ọtụtụ ndị na-ere ahịa ọhụụ ọhụụ na-adabaghị adaba.
Inweghi Oge Inyocha Nyocha Crypto
Na-eduga na ngalaba dị n'elu, akara ngosi Telegram crypto dịkwa mma maka ndị na-enweghị oge iji na-arụsi ọrụ ike. Chọpụta, ị ka ga-etinye iwu ịzụta na ire ahịa dị iche iche nke akara ndị ahụ na-agwa gị ka ị rụọ ọrụ. Ma, ị ga-enwe ike iwepụ ọtụtụ awa nke nyocha kwa ụbọchị nke achọrọ n'ụzọ ọzọ iji nwee ihe ịga nke ọma na ọnọdụ azụmaahịa crypto.
Nke a bụ n'ihi na usoro nlekọta nyocha na nyocha na-elekọta gị nke Telegram crypto na-eweta ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, anyị na Mụta 2 Trade nwere otu ndị ahịa nwere ahụmịhe n'ime ụlọ na-eme nyocha dị omimi na izu niile. Ozugbo anyị chọtara ohere ịzụ ahịa, otu onye otu ga-emelite ndị otu mgbaama anyị site na ngwa Telegram.
Want Chọrọ Ibufe Ọtụtụ dingzụ Ahịa
Ka anyị were ya na ị bụ ọkachamara azụmaahịa nwere nnukwu ndekọ egwu na-enweta uru na-agbanwe agbanwe. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, mgbe ahụ ị ga-amata ụzọ mbụ na ọ bụ naanị ọtụtụ akụ akụ na ụba ị nwere ike ilekwasị anya.
Iji maa atụ, ị nwere ike ịma ins na out of a họrọ nọmba nke ụzọ abụọ cryptocurrency - mana ị nweghị ike ịghọ ọkachamara na ha niile.
N'iburu nke a n'uche, akara Telegram crypto na-enye gị ohere ịgbasa n'ọtụtụ ahịa dị iche iche. Ọzọkwa, nke a bụ n'ihi na njem nyocha abụghị ihe ịchọrọ ichegbu onwe gị.
Kama nke ahụ, onye ọrụ akara gị ahọpụtara ga-enwe nka, ahụmịhe, na teknụzụ iji nyochaa ọtụtụ akụ na akụ.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụghị naanị na Mụta 2 Trade enweela ndị ahịa n'ime ụlọ bụ ndị ọkachamara na cryptocurrencies - mana akụ ndị ọzọ. Nke a gụnyere Forex, ebuka, indices na ngwaahịa ndị dị ka gold na mmanụ.
Wantchọrọ Accessbanye na Obodo Azụmaahịa Cryptocurrency
Uru nke ịbụ akụkụ nke obodo azụmaahịa zuru ezu nke crypto agaghị ekwupụta ya. Nke a bụ n'ihi na ị ga-enwe ike ịbịaru ndị nwere otu obi na mmadụ niile chọrọ imezu otu ebumnuche - inweta ego site na ahịa ọtụtụ ijeri dollar cryptocurrency.
Mgbe ị na-eji Telegram crypto mgbaàmà ọrụ dị ka Mụta 2 Trade, ị ga-enwe ohere ọ fọrọ nke nta 5,000 òtù. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ga - enweghị uche (ma eleghị anya dị ka gị onwe gị), ndị ọzọ ga - enwe ọtụtụ afọ na ohere. N'ezie, nke a gụnyere ndị otu anyị na-azụ ahịa n'ime ụlọ.
Site na ịbụ akụkụ nke obodo azụmaahịa crypto, ị ga-enwe ike ịmata nghọta nke ahịa site n'aka ndị otu gị, nwee ike ịjụ ajụjụ, ma ọ bụ nọdụ ala ma chere ka akara ngosi na-esote!
Kedu ka mgbama Telegram Crypto si arụ ọrụ?
Yabụ ugbu a anyị akọwarala onye mgbaàmà Telegram crypto nwere ike ịdị mma maka ya, ọ dị mkpa ugbu a ka anyị nwetakwuo ntakịrị otu mpaghara ebe azụmaahịa a si arụ ọrụ.
A sị ka e kwuwe, ị ga-etinye isi obodo gị azụmaahịa mgbe ị na-eme ihe mgbaàmà, yabụ ọ dị gị mkpa ịghọta etu ihe si arụ ọrụ tupu ị daba.
Ejiri Nkọwa ahia niile
Mgbe inwetara akara site na Mụọ 2 Trade, ị ga-enweta ihe niile ịchọrọ iji mee ya. Nke ahụ bụ ịsị, anyị anaghị akwụsị igosipụta gị ụzọ abụọ cryptocurrency na ọnụahịa ntinye. Kama nke ahụ, a ga-enye gị ọnụego ọpụpụ achọrọ ịchọrọ na nkwụsị nkwụsị.
Nke a bụ ihe atụ nke ihe Mgbaàmà 2 Trade Telegram crypto signal ga-adị ka:
ụzọ: XRP / USD
Ordergba Iwu: $ 0.2890
Were-Uru: $ 0.2689
Nkwụsị-Ọnwụ: $ 0.2970
Na-atụ aro Risk: 1%
Dịka ị pụrụ ịhụ site n'elu, enwere data isii ị ga - enweta site na akara akara Telegram anyị. N'ihu ụzọ nke a bụ ụzọ mkpuchi ị kwesịrị ịzụ ahịa na ma ị kwesịrị ịhọrọ maka ịzụta ma ọ bụ ire ahịa.
Na n'ezie - nke a gụnyekwara ego ntinye achọrọ. N'okwu a, nke ahụ bụ usoro ịgba izu na XRP / USD na $ 0.2890. Ihe ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ndị na-enye akara ngosi crypto na oghere bụ na nke a bụ ihe ị ga-enweta. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ebe ị nwere aro ịzụ ahịa na ọnụahịa ntinye atụ aro - ịkwesịrị iji usoro ịpụpụ gị.
Nke a megidere ọdịdị nke ihe ọrụ ozi mgbama Telegram kwesịrị ịdị ka ya, ọ bụ ya mere na anyị na-enye mbubata nkwụsị na nnata-uru na ndụmọdụ anyị niile.
Dịka ị pụrụ ịhụ site na ihe atụ dị n'elu, anyị na-atụ aro ọnụahịa nkwụsị-efu nke $ 0.2970.
Ọ bụrụ na ahia ahụ mechara megide anyị na XRP / USD kụrụ $ 0.2970 - a ga-emechi ọnọdụ ahụ na akpaghị aka.
Nke a na-eme ka anyị jide n'aka na anyị ga-enwe obere nsogbu anyị.
Ọzọkwa, anyị họọrọ maka uru-uru nke $ 0.2689.
Dị nnọọ ka iwu ahụ kwụsịrị na-efu na mbụ, ọ bụrụ na ọnụahịa a erute n'ahịa ahụ, a ga-emechi ahịa anyị na-akpaghị aka.
Naanị oge a, na ọnụahịa uru anyị lekwasịrị anya. Ka anyị na-ekpughe n'ụzọ zuru ezu n'oge na-adịghị anya, akara akara Telegram anyị na-enwekarị ihe egwu na ụgwọ ọrụ. Iji maa atụ, anyị nwere ike itinye ihe dịka 1% iji nweta uru 4%, ma ọ bụ butuo 2% iji nweta uru 5%. Kedu ụzọ ọ bụla, nke a ga-egosipụta na nkwụsị nkwụsị na oke-uru na-abịa na ozi Telegram crypto dị iche iche.
Otu anyị si kari ahịa Cryptocurrency
I nwere ike na-eche otú anyị n'ezie nweta ozi mgbanaka Telegram anyị. E kwuwerị, ọ dị mma ma na-ezipụ aro ahịa - onye ọ bụla nwere ike ime nke ahụ. Ma, anyị na Mmụta 2 Trade ejirila akụkọ ihe mere eme gbachitere mmeri 76% - nke pụtara na ka oge na-aga, anyị na-ewepụta azụmaahịa na-emeri karịa karịa ndị na-efunahụ.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, anyị Telegram crypto n'ókè na-eme na azụ nke miri emi nnyocha site anyị otu nke na-ụlọ ahịa. Ihe ka ukwuu n'ime nke a bụ nyocha teknụzụ, n'agbanyeghị, ndị otu anyị na-edobe taabụ na isi.
Dị ka anyị tụlere na mbido, njem nyocha nyocha abụghị ihe dị mfe nnabata. Dịka ọmụmaatụ, ndị ahịa anyị nwere ahụmahụ ga-eji ọtụtụ teknụzụ ndị ọrụ aka na ụbọchị azụmaahịa. Ha na-ejikwa ihu igwe dị iche iche eme ihe iji hụ na ha nwere ọhụụ nnụnụ zuru oke banyere ọnọdụ nke ahịa crypto ugbu a.
Na mgbakwunye, ọ bụghị naanị maka ịchọta ọnọdụ. Nke a bụ n'ihi na ndị otu anyị na-azụ ahịa na-agbasi mbọ ike ịchọta ọnụahịa ntinye na ụzọ ọpụpụ kachasị mma. Na ngwụcha, nke a na-eme ka anyị mata na anyị agaghị efufu ihe anyị ga-eme ma mgbaàmà crypto agaghị aga n'atụmatụ. Nke a dị oke mkpa, ebe ọ bụ na ọ bụghị akara ngosi anyị niile ga-eweghachi uru. Onye ọ bụla na-eweta ọrụ nke na-agwa gị ihe dị iche anaghị eme ihe n'eziokwu.
Gịnị mere eji eji Telegram maka mgbaàmà Crypto?
Ihe ngosi ahia abiala otutu iri afo - ogologo oge tupu ntanetị nke ntanetị. N'oge ahụ, a na-enye akara dị ka ọkpụkpọ ekwentị. Dị ka ị pụrụ iche n'echiche, nke a abụghị nnukwu ihe ma na-efu ego. Mgbe ahụ ndị na-enye ihe mgbaàmà mere mgbanwe na email ozugbo ahia n'ịntanetị ghọrọ ihe.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ihe ntanetị mgbanaka crypto ka na-eji nke a taa, ọ ka bụ obere arụmọrụ. A sị ka e kwuwe, enwere ohere ọ bụla na ị gaghị ahụ email na oge iji rụọ ọrụ na mgbaama ahụ wee si otú a - hapụ ohere ahụ. Nke a bụ ihe mere ọrụ Mụọ 2 Trade crypto jiri Telegram.
Ozugbo otu n’ime ndị ahịa anyị nọ n’ụlọ na-ezipụ ihe mgbaàmà, ọ ga-eziga ozi na ngwa Telegram gị. Ọ bụrụhaala na ị nwere ọkwa ọkwa gbanyere, ị gaghị echefu mgbaàmà ọ bụla. Na mgbakwunye na nke a, Telegram na-enye anyị ohere ịmekọrịta mmekọrịta na akara anyị.
Dịka ọmụmaatụ, anyị ga-eziga onyonyo nke nyocha nyocha nke teknụzụ anyị ka ndị otu anyị wee lelee usoro echiche anyị. Na n'ezie - dịka anyị kwurula na mbụ, Telegram mara mma maka ịmepụta obodo azụmaahịa. Ihe ị ga - eme bụ isonyere otu anyị, ị ga - enwe ohere ị ga - eji ihe dị ka mmadụ 5,000 ga - atụle ndị ahịa na- amụ ahịa 2 kwalite ahịa banyere ahịa.
Emehiela banyere ya - ụdị azụmaahịa ọ bụla nwere ihe egwu. Ma ị na-azụ ọdịnala ọdịnala, ịzụta agbụ, ma ọ bụ na-azụ ahịa ụzọ abụọ - enwere ohere ọ bụla ị ga-efu. Nke a abụghị ihe dị iche na ịzụta na ire cryptocurrencies - dị ka ahịa na-ezighi ezi ga-ebute mfu.
Dịka anyị kwuburu, anyị anaghị enweta ya mgbe niile. Mana, ka oge na-aga, ọnụọgụ mmeri nke 76% enyerela obodo anyị aka nke ọma. N'ikwu nke a, inwe ọtụtụ ahịa na-emeri karịa nke ndị na-efunahụ agaghị eme ka ị nweta uru na-agbanwe agbanwe, ogologo oge. Nke a bụ n'ihi na ị ka kwesiri inwe usoro ịhazi usoro ihe egwu.
N'okpuru ebe a, anyị kpuchiri isi nke otu ị ga - esi jiri akara ngosi Telegram crypto n'ụzọ dị egwu.
Nchịkwa bankroll bụ tiorọ eji arụ ọrụ na mpaghara azụmaahịa niile. Nanị ya na-ezo aka n'usoro ichedo isi obodo ahia gị site na nnukwu mfu. Mostzọ kachasị dị irè na nke a na-ejikarị eme nke a bụ ịkwụsị oke ị na-etinye n'otu ọnọdụ. Nke a kachasị mma na usoro pasent - megide nke njikwa akaụntụ gị ugbu a.
Iji maa atụ, ka anyị chee na ị kpebiri iji osisi gị gbanye 1.5%.
Ọ bụrụ na isi ahia gị ugbu a dị $ 4,000 - nke a pụtara na ịnweghị ike itinye ihe karịrị $ 60 na otu ahia.
Mana n'ezie - uru nke itule azụmaahịa gị ga-arịgo na ala na ọnọdụ ọ bụla ị mechiri.
Dịka ọmụmaatụ, na njedebe nke ọnwa 1, ị nwere ike ịbawanyela isi obodo ahia gị $ 5,000.
Dịka, oke osisi gị ugbu a dị $ 75.
Nke a bụ n'ihi na njedebe gị 1.5% dabere na $ 5,000 ugbu a, na-emegide $ 4,000 nke ị malitere.
N'ime ụdị ụzọ a, ọ ga-esiri gị ike na ị ga-akpọ isi obodo gị ọkụ. Ọbụlagodi na ị na-agabiga nsonazụ ọjọọ, nsonaazụ azụmaahịa gị kachasị ga-ajụ ka nguzozi gị ga-ada.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị nwere ọnwa nke abụọ na-azụ ahịa.
N'aka nke ya, ihe ndekọ ego azụmaahịa gị na-akwụ ugbu a naanị $ 3,200
Nke a pụtara na ị bụ $ 800 gbadara site na nhazi mbu nke $ 4,000
Mana, dabere na oke osisi 1.5%, nke kachasị ị ga-etinye n'ihe ize ndụ na $ 3,200 bụ $ 48
Dịka ị pụrụ ịhụ, nke a pere mpe karịa $ 75 osisi ị nwere ike itinye n'ihe ize ndụ na ọnwa gara aga mgbe nguzo gị guzo na $ 5,000
N'ikpeazụ, site na iji usoro njikwa ihe egwu dị na njikọ na akara Telegram crypto, ị nwere ike hụ na ị ga-anọ n'egwuregwu ahụ ogologo oge. N’aka nke ọzọ, ịghara ime nke a, ọ ga - ewetakwa nnukwu mfu ego.
Egwu na ụgwọ ụgwọ
Dika anyi kwuburu na mbu, ihe omuma Telegram anyi nile biara na onodu onu ogugu. Ọzọkwa, nke a bụ ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke anyị dị njikere itinye n'ihe mgbaàmà azụmaahịa a kapịrị ọnụ, tinyere uru ndị anyị na-achọ ịdabere.
N'ọtụtụ ọnọdụ, anyị na-ahọrọ oke ihe egwu / ụgwọ ọrụ nke 1: 3. Nke a pụtara na anyị na-achọ ịme 3% na uru, mana n'otu oge ahụ, ga-emechi ọnọdụ anyị ma ọ bụrụ na ọ ga-emegide anyị site na 1%. A ga-egosipụta nke a na nkwụnye ego nkwụsị na nnweta-uru nke na-abịa na akara akara Telegram anyị.
Nke a bụ ihe atụ nke otu 1: 3 nsogbu / ụgwọ ọrụ ruru:
Ihe mgbaàmà ahia anyị na-atụ aro ịtụkwasị usoro ịzụta na BTC / ETH na 38.50
1% nke ntinye ntinye anyị tụrụ aro bụ 0.38. Dị ka ndị dị otú ahụ, a na-etinye iwu nkwụsị anyị na 38.12
3% nke ọnụahịa ntinye anyị tụrụ aro bụ 1.15. Dị ka ndị dị otú a, a na-ahazi iwu ego anyị na 39.65.
Dịka ọ dị n'elu, ọ dịghị mkpa ihe na-eme na BTC / ETH price edinam - dị ka naanị otu n’ime ihe abụọ nwere ike ime. Ọ bụrụ na akara ngosi Telegram crypto gosipụtara ihe ịga nke ọma, mgbe ahụ, a ga-emechi iwu anyị na uru 3% mgbe ụzọ abụọ ahụ rutere 39.65. Ma, ọ bụrụ na ahịa ndị ahụ na-emegide anyị, anyị na-amachi ọghọm anyị nwere na 1% mgbe ụzọ abụọ ahụ rutere 38.12.
Na-eduga na ngalaba dị n'elu, 3% uru na ahia nke nwere ike ịnọgide na-egwu egwu karịa awa ole na ole buru ibu. Emechakwa, ị ga-eche ọtụtụ afọ na afọ iji rite nnukwu ego site na itinye ego gị na akaụntụ nchekwa ọdịnala!
Agbanyeghị, ekwesịrị ịmara na ị nwere ike isiri ike ị nweta uru zuru oke kwa ọnwa ma ọ bụrụ na isi obodo gị pere mpe. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị were na ị tinyere $ 500 n'ihe ize ndụ n'otu n'ime akara crypto anyị weghachitere uru nke 3%. Nke a ga - eme ka ị nweta obere ego nke $ 15.
Dị ka ndị dị otú a, ọtụtụ ndị na-amụ ihe mgbaàmà Mụta 2 ga-etinye ihe mgbakwunye na ọnọdụ ha. Onu ogugu ugwo nke inwere ike inweta ga-adabere na onye na-ere ahia nke ị debanyere na obodo gi. Nke a bụ n'ihi na ụfọdụ mgbochi dị - ọkachasị na Europe na Australia.
Ka o sina dị, ọ bụrụ na ebe ị na-ahọrọ maka ịzụ ahịa crypto ga-enye gị ohere itinye mpempe akwụkwọ, kwuo 1:10 - nke a pụtara na uru gị bara ụba site na ihe dị ka nke 10. N'aka nke ya, obere uru nke $ 15 ga-atụgharị gaa na nnukwu nloghachi nke $ 150.
Kedu ụdị Crypto ka mgbaama Telegram anyị na-ekpuchi?
Na-abanye na 2021, enwere puku kwuru puku cryptocurrencies dị adị. Na usoro nke ịzụ ahịa azụmaahịa, ị nwere ike ịmụba ọnụ ọgụgụ a site na ọnụ ọgụgụ abụọ.
Nke a bụ n'ihi na enwere ike ire ego ego dijitalụ ọ bụla megide mkpụrụ ego nke otu onye. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịzụ Bitcoin megide Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash, EOS, na ọtụtụ puku ndị ọzọ. Enwekwara ike ire ahia ego megide ego fiat dị ka dollar US.
N'ebe a na Mụọ 2 Trade, akara akara Telegram anyị na-ekpuchi alaka abụọ dị iche iche nke oghere - fiat-to-crypto and crypto cross-pairs.
Fiat ka Crypto: Dị ka aha ahụ na-egosi, fiat to crypto ụzọ abụọ nwere otu ego dijitalụ na otu ego fiat. Pairzọ kachasị ere ahịa nke ụdị a bụ BTC / USD - nke ga - ahụ na ị ga - atụgharị uche na ọnụego mgbanwe n'etiti Bitcoin na dollar US.
Crypto Cross-ụzọ abụọ: Cryptodị ụdị crypto a ga-enwe ego abụọ na-asọ mpi. Dịka ọmụmaatụ, BTC / ETH na EOS / XRP bụ crypto cross-abụọ.
N'ikpeazụ, otu ndị na-ere ahịa ụlọ anyị nwere ngwaọrụ niile achọrọ iji nyochaa ahịa cryptocurrency n'oge elekere. Nke a pụtara na ha na-ele anya mgbe niile maka ohere ịzụ ahịa wee si otú a - akara Telegram crypto ị na-enweta ga-adị iche iche.
Na-arụ ọrụ na Telegram Crypto Signals
Ọ bụrụ n’ị gụọ akwụkwọ ntuziaka anyị rue ebe a, mgbe ahụ ị kwesịrị ịghọta ugbu a otu esi amata ozi mgbatị nke azụmahịa 2 nke XNUMX Telegram. Ikwesiri inwe akụrụngwa iji tinye atụmatụ dị egwu - gụnyere njikwa bankroll yana ịghọta oke ụgwọ ọrụ.
Dịka, usoro ọzọ nke njem mgbama Telegram crypto bụ ịchọta ikpo okwu azụmaahịa kwesịrị ekwesị. A sị ka e kwuwe, ị ga-achọ iji onye na-ere ahịa n'ịntanetị ma ọ bụrụ na ịchọrọ itinye ntinye na ntinye iwu nke akara anyị na-enye.
Ozi ọma ahụ bụ na e nwere ọtụtụ narị narị n'elu ikpo okwu trading crypto na oghere ịntanetị. Akụkọ ọjọọ bụ na ọ bụ naanị ọnụọgụ nhọrọ ka ekwesịrị ịtụle.
Na ngalaba ndị dị n'okpuru anyị na-akọwa isi ihe ị kwesịrị ịtụle na ịhọrọ onye na-azụ ahịa azụmaahịa crypto. Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji nyocha nyocha n'elu ikpo okwu n'onwe gị, ị nwere ike ịgụ akwụkwọ ntuziaka anyị kachasị mma ndị na-ere ahịa cryptocurrency nke 2021 na gafere.
A na-achịkwa saịtị ahia Crypto?
Eleghị anya ị maara na oghere azụmaahịa cryptocurrency ka na-achọ ụkwụ ya. Site na nke a, anyị na-ekwu na oge na oge ọzọ anyị na-anụ mkpesa mgbasa ozi na nnukwu hacks mgbanwe cryptocurrency. Nke a bụ ya mere ụlọ ọrụ ahụ ji ahapụ ọtụtụ ndị ahịa ọhụụ, ebe ọ bụ na enwere nchegbu mgbe niile na usoro ịre ahịa na ajụjụ ga-abanye na nsogbu.
N'iburu nke a n'uche, anyị ga-atụ aro na ị ga-eji naanị ndị na-ere ahịa cryptocurrency. Nke a ga-abịa n'ụdị ụlọ ọrụ ikikere a ma ama dị ka CySEC ma ọ bụ FCA. Otú ọ dị, anyị kwesịrị icheta na iji rite uru na usoro ndị a na-achịkwa, ị ga-azụrịrị ahịa CFDs crypto.
Nke a pụtara na ị nwere ike ime ihe na Telegram crypto n'ókè na-enweghị mkpa ịnweta ihe kpatara akụ. CFDs bara uru n'ezie maka ọtụtụ ebumnuche, ebe ọ bụ na ha na-enye gị ohere ịga obere ma tinyekwa itinye ego. Na mgbakwunye, imirikiti nyiwe crypto CFD nke anyị na-akwado ga-enyere gị aka ịzụ ahịa n'ụzọ enweghị ọrụ.
Pzọ dị a Doesaa ka ikpo okwu ahụ na-akwado?
Dịka anyị kwuru na mbụ, ndị otu anyị na-azụ ahịa n’ime ụlọ ga-eziga ozi mgbama anyị dị iche iche. N'aka nke ya, ikwesiri ijide n'aka na onye ị họọrọ na-enye ezigbo ọnụọgụ ahịa azụmaahịa cryptocurrency.
Na mmechi, ị chọghị ịmepe akaụntụ na ọtụtụ ndị na-eweta dị iche iche, ebe nke a nwere ike ịbụ nro nrọ. Kama nke ahụ, ọ kacha mma ka ị rapara na otu usoro a na-achịkwa nke na-enye ọnụọgụ abụọ nke crypto.
Kedu Commlọrụ Na Broker Na-akwụ ụgwọ?
Ndị na-ere ahịa cryptocurrency na nyiwe azụmaahịa na azụmaahịa nke ị nweta uru. Ha na-eme nke a site na ịkwụ ụgwọ metụtara azụmahịa. Fọdụ ga-enwetakwa ego mgbe ị na-edebe ma ọ bụ na-ewepụ ego, n'akụkụ ego abalị na enweghị mmekpa ahụ.
Ma, ụgwọ kachasị mkpa ịkwesịrị ile anya bụ ọrụ azụmaahịa nke onye na-ere ahịa na-akwụ n'akụkụ akụkụ mgbasa ozi. Nke mbu na-abụkarị pasent na-aba ụba site na osisi gị.
Dịka ọmụmaatụ, Coinbase na-akwụ ụgwọ 1.5% kwa ahia, nke buru ibu. N'ezie, nke a ga - eme ka ekwenye ekwenye na Telegram crypto, n'ihi na ọnụego ọrụ ga - eri ụlọ ọrụ anyị. Dị ka anyị kwuru n'otu oge gara aga, nke a bụ ihe kpatara na anyị na-atụkarị aro maka ndị na-ere ahịa na-enweghị ọrụ.
Na mgbakwunye na nke a, ihe niile crypto ụzọ ga-abịa na mgbasa. Nke a bụ ihe dị iche n’etiti ịzụta na ire ọnụahịa nke ị hụrụ n’ihuenyo. Oghere dị n'etiti ọnụahịa abụọ ahụ bụ otu onye na-ere ahịa na ajụjụ na-ekwe nkwa na-enweta uru n'agbanyeghị ihe na-eme na ahịa.
Dị ka ndị dị otú a, n'elu ndị na-ere ahịa na-enweghị ọrụ, anyị na-elekwasịkwa anya na nyiwe ndị na-agbasa mgbasa. Nke a dị oke mkpa mgbe ị tụlere ọdịdị nke akara telegram Telegram anyị. Nke ahụ bụ ịsị, anyị na-ahọrọkarị uru bara uru na mpaghara nke 3%, nke na-agaghị adabara onye na-ere ahịa cryptocurrency na-akwụ ụgwọ dị elu.
Ndi ore ahia a na akwado ahia ahia?
Anyị kwesịkwara ịkọwa mkpa ọ dị ịhọrọ ọnye ego cryptocurrency na-akwado azụmaahịa mkpanaka. Na ụwa zuru oke, nke a kwesịrị ịbịa n'ụdị ngwa mkpanaka dabara na sistemụ arụmọrụ gị.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, site na ịnweta ngwa ahịa azụmaahịa ị ga-enwe ike ịme ihe na akara ngosi Telegram crypto anyị - ozugbo ekesara ozi ahụ.
A sị ka e kwuwe, enwere ike ịbịa oge ịnata mgbaama ma ị pụọla na ngwaọrụ gị. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, gị trading ngwa na-eweta ga-ekwe ka ị na-edebe iwu chọrọ n'agbanyeghị ebe ị na-emi odude!
Free Crypto n'ókè n'ókè Telegram
Ọ bụrụ n ’ịchụ nta maka akara ekwentị na - ezigara ekwentị Telegram, ị nwere ike ịkwụsịtụ. Chee echiche banyere ya - onye na - eweta akara ngosi nwere ike na - enyocha ahịa azụmaahịa ego na elekere. Ọbụghị naanị na ha ga - eji ngwa ọgụgụ ọgụgụ eserese na teknuzu egosipụtara, mana ha ga - esite na ọtụtụ ahụmịhe.
N’iburu nke a n’uche, ị chere na onye na-enye akara ngosi crypto ga-eme ihe a niile n’ebughi ego? Eleghị anya ọ bụghị. N'ezie, ihe anyị na-achọtakarị na free crypto n'ókè Telegram iche iche bụ na ha ga-ekpuchi ụfọdụ akụkụ nke aro ahịa.
Iji maa atụ, ihe ngbanye akara n'efu Telegram otu nwere ike ịgwa gị ka ị gaa ogologo oge na ETH / USD, wee mepụta usoro nkwụsị na $ 750.67. Agbanyeghị, akara ngosi a abaghị uru, ebe ọ bụ na ịnweghị ohere ịbanye na ọnụahịa ntinye a tụrụ aro, ma ọ bụ mpaghara ebumnuche ebumnuche.
Emehiela banyere ya - iji nweta isi data abụọ a - ị ga-akwụ ụgwọ!
Ihe mgbaàmà Crypto na Telegram - Atụmatụ na ịnye ọnụahịa
Ọ bụrụ na ịchọrọ ụda nke ihe ọrụ mgbaàmà nke Mụọ 2 Trade Telegram crypto na-enye maka ebumnuche ego gị ogologo oge, ugbu a anyị ga-atụle ọnụọgụ dị oke mkpa - ọnụahịa.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, anyị na-enye atụmatụ abụọ dị iche iche ka ị tụlee. N’okpuru, anyị na-akọwa etu atụmatụ mgbaama ọ bụla si arụ ọrụ nke ọma.
Ihe mgbaàmà Crypto efu site na Telegram
Anyị ghọtara na enwere ọtụtụ obi abụọ na ogige mgbaàmà crypto, ọ bụ ya mere anyị ji enye mmadụ niile atụmatụ n'efu. Na nkenke, nke a anaghị achọ ozi ego ọ bụla n'aka gị. Kama nke ahụ, ị ​​ga-emepe akaụntụ ma sonyere ndị otu Learn 2 Trade Telegram.
N'ime ime nke a, ị ga-enweta akara ngosi 3 kwa izu. Ọ bụ ezie na nke a agaghị ezuru gị iji nweta ọtụtụ ọrụ ọrụ mgbaàmà crypto anyị, ọ ga-eme ka ịnwale anyị. You'll ga-ahụ ụdị azụmaahịa crypto anyị na-etinyekarị yana ihe egwu / ụgwọ ọrụ dabara.
N’ụzọ dị mkpa, akara ngosi 3 kwa izu ị na-enweta site na ngwa Telegram bụ otu akara ahụ ndị otu anyị dị elu natara. Nke ahụ bụ ịsị, ị ga - enweta otu ozi ahụ - dịka ọnụahịa mbata, ọnụ ahịa nkwụsị na ụgwọ iji nweta uru.
Agbanyeghị - ma dịka anyị kọwara na ngalaba dị n'okpuru, atụmatụ adịchaghị na-abịa n'ụzọ dị ịrịba ama karịa n'ụzọ nke mgbaama ụbọchị niile.
Ọnụahịa Crypto adịchaghị site na Telegram
Site na ịbanye na ọrụ akara ngosi crypto anyị, na nkezi ị ga-enweta aro 5 kwa ụbọchị site na Telegram. Nke a pụtara na ị ga-enweta ndụmọdụ ọ bụla azụmaahịa nke otu anyị na-ekesa. Nke a na-ekpuchi oge niile, yabụ na ị gaghị aghaghere akụkụ ọ bụla nke ụwa ị nọ.
Dị ka aha ahụ na-egosi, akaụntụ adịchaghị abịa na ego. Na nke ahụ kwuru, anyị kwenyere na ọnụahịa anyị na-akwụ - n'ihe metụtara ọrụ na nsonaazụ akụkọ ihe mere eme, na-enye ezigbo uru. Nke a bụ ikpe kachasị mgbe ị tụlere ọnụọgụ mmeri 76% anyị gbachitere ruo taa.
Biko chọta n'okpuru ngwugwu dị iche iche anyị na-enye maka ọrụ mgbama ozi Telegram crypto anyị.
35 kwa ọnwa - akwụ ụgwọ kwa ọnwa
£ 65 maka ọnwa atọ (£ 21.66 kwa ọnwa) - akwụ ụgwọ kwa ọnwa
£ 95 maka ọnwa isii (£ 15.83 kwa ọnwa) - akwụ ụgwọ kwa afọ
£ 250 maka Ndụ Oge
N'iburu ihe ndị dị n'elu n'uche, ị nwere nhọrọ ole na ole ị nwere ma ọ bụrụ na ịnweghị n'aka maka ịnọnyere anyị n'ikpeazụ. Nke mbu, atumatu anyi nile na-abia na inye nkwa iji nweghachi ego nkwanye ugwu iri-ato.
Nke a pụtara na ị nwere ike ịrịọ nkwụghachi zuru ezu ma ọ bụrụ na ịnweghị obi ụtọ na ọrụ ị natara. Ole na ole n'ime ndị otu anyị ejirila nke a mee ihe, dị ka Mụta 2 ahia afọ ojuju afọ gara aga dị elu.
Na mgbakwunye na nkwa ịkwụghachi ego, anyị kwesịrị iburu n'uche na etinyeghị gị na atụmatụ ị họọrọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịhọrọ atụmatụ ọnwa na-agagharị, ogologo oge ị na-ekpochi bụ otu ọnwa.
N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ị kpebie iji atụmatụ anyị dị ogologo karịa - nke na-abịa na ọnụego dị ala kwa ọnwa, nke kachasị ogologo akpọchiri gị bụ ọnwa 3 ma ọ bụ 6.
Otu esi esonye na otu Group Telegram Crypto anyị
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmalite ịkpata ego na akara Telegram crypto, anyị ga-akọwa ihe ịkwesịrị ime iji bido ugbu a.
Kwụpụ 1: Mepee Akaụntụ Broker Crypto
Ebe mbido ụgbọ mmiri mbụ gị bụ ịchọta saịtị azụmaahịa crypto na-adaba na akara anyị. Nke a pụtara na onye na-ere ahia kwesịrị ịhazi ya ma nye ya ego asọmpi.
Offọdụ n'ime nyiwe kachasị ewu ewu na nke a bụ Skilling na eToro. Ndị ahịa abụọ a na-enye azụmaahịa na-akwụghị ụgwọ ọrụ ma kwado usoro ịkwụ ụgwọ kwa ụbọchị dịka debit / kaadị akwụmụgwọ na ọbụlagodi e-wallets.
Nzọụkwụ 2: Họrọ Atụmatụ Mụta Ihe ahia nke Mụta 2
Iji malite ịnata akara Telegram crypto anyị na oge, ị ga-ebu ụzọ kpebie atụmatụ ị chọrọ ịmalite. Dịka e kwuru n'elu, nke a bụ nhọrọ n'etiti atụmatụ anyị n'efu na nke kachasị elu.
Nzọụkwụ 3: Budata Telegram ma sonyere
Mgbe ịhọrọ atụmatụ ịchọrọ ibido, ọ bụ naanị maka ịbanye n'ìgwè Telegram anyị. Ọ bụrụ n’itinyebeghị ngwa ahụ na ekwentị gị, ịnwere ike ibudata ya na Playlọ Ahịa Google ma ọ bụ Applọ Ahịa - n’akwụghị ụgwọ.
Ozugbo ị sonyeere anyị otu, echefula iji hụ na gị Telegram ngwa nwere ụda ificationsma Ọkwa agbanwuru. N'ime ime nke a, ị gaghị echefu ohere ịzụ ahịa ọzọ!
Crypto Signals Telegram Guide: Mkpebi ahụ?
Anyị na-atụ anya na site n'ịgụ ntuziaka a n'ụzọ zuru ezu ugbu a ị nwere nghọta zuru oke nke ọtụtụ uru nke akara Telegram crypto na-enye.
Ma nke ahụ enwere ike ịzụ ahịa ego dijitalụ n'ụzọ ntakịrị ma ọ bụ na-ezere mkpa ọ dị ịmụ nyocha teknụzụ - akara na-enye gị ohere ịnweta ọnọdụ azụmaahịa cryptocurrency na mfe.
Ihe ị ga - eme bụ isonyere ndị otu Learn 2 Trade Telegram na onye na - ere ahịa dabara adaba itinye akara ngosi anyị!
Kedu ihe bụ akara Telegram crypto?
Ihe nrịba ama Crypto bụ aro ahịa na-agwa gị iwu nke ị ga - - dabere na nyocha ahịa miri emi. Site na ịnweta akara ndị a site na Telegram, ọkwa ga-apụta ozugbo e zigara aro ahụ!
Ego ole ka ọrụ mgbaàmà Learn 2 Trade na-eme?
Ọ na-aga n'ekwughị na oke uru ga-adịgasị iche site na ọnwa ruo n'ọnwa. Na nke ahụ kwuru, na akụkọ ihe mere eme, anyị agbachitere ọnụego mmeri 76%. Nke a pụtara na ahịa 76 n'ime otu narị na-aba uru.
Kedu ụdị ihe mkpuchi dị iche iche nke akara gị na-elekwasị anya?
Anyị na-elekwasị anya na isi ihe mkpuchi dị ọnụ ahịa dị ọnụ na dollar US. Nke a bụ n'ihi na ahịa ndị a na-erite uru site n'ọtụtụ ọkwa azụmaahịa azụmaahịa. Na nke ahụ kwuru, anyị na-eme site n'oge ruo n'oge na-ahụ ohere ịzụ ahịa na obere ụzọ abụọ mmiri mmiri cryptocurrency.
Kedu ihe egwu dị na akara Telegram crypto?
Ma ị na-eji ọrụ mgbaàmà Telegram ma ọ bụ na ị naghị eji, azụmaahịa niile na-ebute ihe egwu. Na nke ahụ kwuru, anyị agaghị etinye ihe karịrị 1% na otu azụmaahịa, na-eme ka ị hụ na ị nwere ohere kachasị mma iji chebe bankroll gị ogologo oge.
You na-enye ikpe n'efu?
Anyị na-enye ndị ahịa ọhụụ ego ịkwụ ụgwọ ụbọchị 30 na ịzụrụ atụmatụ atụmatụ anyị niile - enweghị ajụjụ a jụrụ. Na mgbakwunye na nke a, anyị na-enyekwa ọrụ mgbaàmà n'efu n'efu nke na-abịa na aro 3 kwa izu.
Emelitere ikpeazụ: February 14th, 2021